रोशनीमाथि महराबाट जर्बजस्ती भएको रेकर्ड सुरक्षित रहेको उमा रेग्मीको खुलासा « रिपोर्टर्स नेपाल
रोशनीमाथि महराबाट जर्बजस्ती भएको रेकर्ड सुरक्षित रहेको उमा रेग्मीको खुलासा
प्रकाशित मिति : 2019 October 9, 12:05 am
काठमाडौं, २१ असोज । नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मीले महरा प्रकरणमा आफूलाई रोशनी शाहीको पक्षमा उभ्याएकी छिन् । उनले रोशनीलाई साथ दिएर महरामाथि कडा कारबाही गराउन भूमिका खेल्दै आएकी छिन् । यसै विषयमा नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बसहका लागि ऋषि धमलाले गरेको सनसनीपूर्ण कुराकानीः
बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ । नेपालमा त्यो कानुनको आवश्यकता भइसकेको छ । त्यो सम्भावना हुनुपर्छ । किन संविधान संसोधनका कुराहरु उठिरहेका छन् । त्यो कुरा किन नउठाउँने ? संविधान संसोधन गरेर पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा कति महिलाहरुले बलत्कृत हुनपर्ने, कति महिलाहरु मर्नुपर्ने, कतिले बलात्कारपछि मारिनुपर्ने, कति महिलाले लोकतन्त्रको नाममा उत्सर्ग दिने ? अमेरिका जस्तो देशलगायत अन्य लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ भने हाम्रोमा किन नहुने । पछिल्लो समय हाम्रो देशमा विभिन्न पावर र प्रलोभवको आडमा महिला हिंसा, हत्या र बलात्कारका घटना बढेर गएकाले पनि मृत्युदण्डको आवश्यक देखिन्छ । त्यसको माध्यमबात २-४ जनालाई मृत्युदण्ड दिइँन थालियो भने बल्ल रोकिन्छ । दोषीलाई कारबाही गर्न डराउने महिलामाथि चाहिं थिचोमिचो गरिरहने चिन्तन त राज्यसँग हुनुभएन नि । कसरी महिलालाई थिचोमिचोबाट रक्षा गर्न सकिन्छ, हत्या, हिंसाबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने सोच राज्यले गर्नुपर्छ । File Photo